Laga bilaabo 03/17/2020, dhammaan shaqaalaha CERB waxay ka shaqeynayaan taleefanka guriga illaa ogeysiis dambe. Waxaan ku heli karnaa inta lagu jiro saacadaha shaqada caadiga ah qolka, emaylka, iyo Skype ama Zoom. Macluumaadka xiriirkeena wuxuu ku yaal dhinaca midig ee dhinaca bidix.
11 / 19 / 2020 - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) wuxuu ansaxiyay $ 488,750 oo deyn ah iyo $ 236,250 oo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalka dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga, shaqo abuurka iyo horumarinta ballaadhinta miyiga ee Clark, Franklin, Skamania, iyo Thurston Degmooyinka . Akhriso inbadan oo Warqada ah…
Mahadsanid si ay u Qabiilooyinka ku midoobay Hindida Waqooyi Galbeed taageeradaada CERB! Akhri wax dheeraad ah…
Xafiiska Badhasaabka ayaa diyaariyey liis ay ku qoran yihiin ilaha loogu talagalay dadka ay saameeyeen duurjoogyada, oo ay ku jiraan guryaha iyo ilaha hoyga, ilaha gobolka iyo federaalka, iyo sidoo kale sida aad u caawin karto inta lagu jiro waqtigan: https://www.governor.wa.gov/news-media/washington-wildfire-resources
Kuwa soo socdaa waa xiriiriyeyaal ku saabsan cusbooneysiinta gobolka, gobolka iyo federaalka Coronavirus. Waxaan sidoo kale ku siiney xoogaa xiriiriyeyaal dheeri ah macluumaadka iyo ilaha internetka qeeybta la hubiyo si ay uga caawiso meheradaada inay maareyso qorsheynta dhibaatooyinka hawlaha.
01/15/2019 - CERB waxay daabacday muuqaalka guud ee mashaariicdooda 2019. Akhri wax dheeraad ah…
Warbixinta Sharci dejinta CERB 2018 (PDF)
Warbixinta Sharci-dejinta ee CERB Miyiga Broadband 2018 (PDF)
2017-19: Biennium dib u eegis - CERB Muhiim ah
2018-19: Sannad Dib-u-eegis ah - Xadka Baadiyaha Miyiga